Isazi Semalt: Isithombe SEO Namathuba Anganikeza
Amavidiyo nezithombe zinikeza ithuba elikhethekile injini yokusesha amathuba okuthuthukisa futhi usize amakhasi akho athumele ama-signals ahlukene e-Google, Bing, Yahoo nezinye izinjini. Abashayeli benjini yokusesha bahlaziya umbhalo wezithombe bese bawuxhumanisa nokuqukethwe kwewebhusayithi yakho. Abaqondi nje kuphela futhi babonise umbhalo wezithombe ngendlela efanele kodwa futhi basebenzise njengomthombo wokuqondisa kokubaluleka kokuqukethwe kwamakhasi athile. Ukulayisha izithombe kuqondile, futhi kunezindlela ezithile zokwengeza ijusi elengeziwe le-SEO ezithombeni.
Isithombe se-Tag Tag:
Amathegi we-alt image anikezela ibhokisini ye-search umongo ocacile wezithombe zakho. Amatheksi asiza i-Google ukuthi iqonde imvelo nencazelo yesithombe sakho futhi isetshenziswe ngabafundi. Amathegi we-alt image asebenza kokubili imisebenzi yokufinyeleleka ne-search engine optimization . Yingakho kufanele ugxile ekubhaleni kahle amathegi wesithombe bese ufaka igama elingukhiye kubo. Amathegi ama-al-good ahlinzeka ngokukodwa okungokhiye okungokhiye wekhasi lamakhasi bese usiza izithombe zakho zibe ziphakeme kakhulu ekufuneni kwesithombe.
U-Oliver King, i-21 (Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwemakhasimende, uthi kufanele ugcine isithombe esifushane kunamagama angu-130 futhi ugweme ukugxila kwegama elingukhiye..Qiniseka ukuthi umbhalo ubheka ngokwemvelo futhi ukhuluma kafushane mayelana nokuqukethwe kwakho. Ngesikhathi esifanayo, kufanele ulawule usayizi wezithombe ezithunyelwe futhi ugweme ukusebenzisa ama-tag emifanekiso yokuhlobisa njengezithombe zangemuva nezinyoni noma izithombe zezilwane. Ngokufaka amathegi we-alt ku-Weebly, kufanele ulayishe isithombe kwisiphakeli bese uchofoze ku-Advanced> Alt Text inketho.
I-caption inikeza ukuqonda kokuqukethwe kwakho, futhi i-Google ibheka amagama-ncazo ukuqonda uhlobo lokuqukethwe kwakho. Isichazamazwi somfanekiso akuyona imfuneko ye-SEO, kodwa kuhle ukuthembeka kwakho konke kwendawo yakho nokubonakala. Kungenzeka ukwengeza amazwibela esithombe ku-Weebly. Kulokhu, kufanele ulayishe isithombe bese ukhetha okukhethwa kukho amagama.
Ama-URL wesithombe nama-Filenames:
Kubalulekile ukwengeza amagama angukhiye kugama lakho lokufaka igama, futhi lokhu kungenye yezindlela ezinhle ze-SEO. I-Google nezinye izinjini zosesho zibuka amafayela okufakiwe ezithombeni bese kukusiza ukuthi ungeze inani kumqukethwe wakho jikelele. Ngaphezu kwalokho, kuba lula kubaphathi bewebhu ukuthola izithombe zabo zibalulwe ekusesheni kwesithombe se-Google, ukushayela ithrafikhi eyengeziwe emakhasini abo wewebhu. Uma ulayisha isithombe ku-Weebly, qiniseka ukuthi i-URL ifana negama lefayela. Ngale ndlela, i-URL yakho yesithombe izobukeka njenge-www.abc.com/yourfilename.jpg. Ngenye yezithombe ezibucayi kakhulu ze-SEO amathuluzi futhi kufanele zisetshenziswe njalo.
Ubukhulu bezithombe zakho kufanele kube nokucabangela futhi kufanele kufane nokuqukethwe kwewebhusayithi yakho. Uma ufinyelela izithombe ezincane, ungazishintsha kabusha usebenzisa amathuluzi athile njenge-Preview for Mac nabanye. Ngokuvamile, izithombe zabantu ze-photoshop ukubanika ukubukeka okubabazayo nokubanzi. Inamba enkulu yamathuluzi iyatholakala kwi-intanethi engakusiza ukuthi ushintshe futhi ushintshe izithombe zakho. Futhi, u-Weebly ubeka ngokuzenzakalelayo isithombe sakho sangemuva nesithombe esihlokweni, ngakho akudingeki ukhathazeke ngokushintsha inani elikhulu lezithombe.